Fiovana… iombonana sy mpiombona | NewsMada
Inona koa ny manaraka? Tsy inona fa ny trangan-javatra lehibe manetsika ny vahoaka manontolo. Teo, ohatra, ny dingana lehibe vitan’ny ekipam-pirenena malagasy Barea tamin’ny Can 2019 tany Ejipta. Farany teo, raha raisina sy heverina ho toy izany: ny fitsidihana apostolika nataon’ny Papa.
Lalao baolina kitra natao tany ivelany ny voalohany; ny faharoa, vahiny avy any ivelany. Na izany aza, nisy ny hetsika sy asa natao teto an-toerana vao nisy fahombiazana tamin’ireny. Eo no mampanontany tena: tsy misy hetsika na trangan-javatra tena azo hanetsehana miaraka ny Malagasy manontolo ve amin’izao?
Ekena, saika nisy hatrany izay niombonana sy nampiombona ny Malagasy ankapobeny teo amin’ny tantara: ny tsy fanekena sy fanoherana ny mpanjanatany, ohatra, ny fahatofohana amin’ny afitsoky ny mpitondra fanjakana sasany… Saingy nisy hatrany naningana tamin’ireny noho ny fiadiana tombontsoa manokana.
Mbola tsy mahafa-bela ny zarazarao hanjakana? Hany ka tsy mety tena ho feno sy tanteraka ary maharitra izay mampiombona ny Malagasy. Fifanosehana sy fifanilihana an-toerana noho ny tombontsoa manokana no anisan’ny tsy mety hampitovy fijery sy hetsika ho amin’izay mampiombona amin’ny soa iombonana?
Ny hetsika atao any ivelany na ny vahiny avy any ivelany tonga eto no mampiombona. Mandra-pahoviana? Nefa hoe manana fototra sy ny tantarany ny tany sy ny vahoakany, manana ny hareny sy ny heriny amin’izany, manana ny olona sy ny fahaiza-manaony, manana ny kolontsainy sy ny soatoaviny…
Tena fantatra ve izany? Hay ny mitrandraka sy mampiasa azy havadika ho asa mivaingana maharitra sy mampivoatra ny olona rehetra… manontolo ho amin’ny fihatsaram-piainana mitohy. Tsy ho fihetsiketsehana sy fisehosehoana fotsiny izany. Mba ny tena tokoa no miova sy mitondra fiovana… iombonana sy mpiombona.
Fotoam-pifidianana izao mila mijery lavitra sy amin’izay tena hanao zavatra amin’izay ho amin’ny fampandrosoana mivantana, fa tsy hikatso na hahemotry amin’ny ady politika efa ho lava…